FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBislama IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiChiyao IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiGujarati IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHmong (White) IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKazakh IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKongo IsiKorea IsiKurdish Kurmanji (SaseCaucasus) IsiKurdish Kurmanji (sesiCyrillic) IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLuvale IsiMacua IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalayalam IsiMaltese IsiMarathi IsiMyanmar IsiNavajo IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiOromo IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSesotho (South Africa) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTok Pisin IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshwa IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiUrdu IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWelsh IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu isi-Igbo
MHLAWUMBI kwakumalunga neminyaka eyi-800 eyadlulayo xa uhlanga lwamaMaori lwahamba umgama omde ngolwandle lusiya kuhlala eNew Zealand. Xa lufika apho, lwafumanisa ukuba loo mhlaba wahluke mpela kwiziqithi ezithandwa yimvula zasePolynesia olwalusuka kuzo. Wawuzaliswe ziintaba ezinomkhenkce ongqindilili, amanzi ashushu kunye nekhephu. Emva kweminyaka eyi-400 lulapho, kwafika olunye uhlanga oluvela eYurophu. Namhlanje abantu abaninzi baseNew Zealand baphila ngendlela yakudala awayephila ngayo ama-Anglo-Saxon nabantu basePolynesia. Abona baninzi bahlala edolophini. Ikomkhulu lalapha, iWellington, yeyona dolophu ikumazantsi ehlabathi.
Amachibi anodaka olubilayo kwiSiqithi EsikuMntla
Nakubeni iNew Zealand iyindawo emi yodwa ehlabathini, nyaka ngamnye kufika abakhenkethi abamalunga neemiliyoni ezintathu ngenxa yezinto ezahlukahlukeneyo ezintle ezilapho.
Umthi onombala wesilivere unokukhula ube mde ngaphezu kweemitha eziyi-10
Kwakucingwa ukuba intaka engakwaziyo ukubhabha ebizwa ngokuba yitakahe ayisekho de kwango-1948
Eli lelona lizwe lineentlobo ezingaqhelekanga nezahlukahlukeneyo zezilwanyana kunye neentaka ezingakwaziyo ukubhabha. Kukho nezirhubuluzi ezifana nolovane ekuthiwa ziituatara, ezinokuphila iminyaka eyi-100, iintlobo ezahlukeneyo zamalulwane nezilwanyana ezinkulu zaselwandle, njengeminenga needolfini.
Yiminyaka ephantse ibe yi-120 ekho amaNgqina KaYehova kweli lizwe. Afundisa iBhayibhile ngeelwimi eziyi-19, ekukho kuzo iilwimi zasePolynesia, isiNiue, isiRarotonga, isiSamoa, nesiTonga.
AmaMaori acula enxibe iimpahla zohlanga lwawo
Igama elithi New Zealand lithathwe kwelommandla waseNetherlands oyiZeeland. AmaMaori wona athi yiAotearoa, igama elithetha “Ilizwe Elinelifu Elide Elimhlophe.”
Ngoxa abantu abaninzi baseNew Zealand bethetha isiNgesi, olona lwimi lwalapha, isiMaori, luyabuya kwaye ngoku lufundiswa nasezikolweni. Lukho nakwiwebhsayithi yamaNgqina KaYehova, u-jw.org.
ABEMI: 4,7 MILIYONI
ILIZWE: ISIQITHI ESIKUMNTLA ESINENTABA-MLILO NAMANZI ASHUSHU. ISIQITHI ESIKUMZANTSI SIZALISWE NGUMKHENKCE ONGQINDILILI